Home News Ciidamo uu hogaaminayo Kornel Caare oo weerar ku qaaday fariisin ay Ciidamada...
Ciidamo uu hogaaminayo Kornel Caare oo weerar ku qaaday fariisin ay Ciidamada Somaliland ku leeyihiin Deegaanka Ceel Afweyn
Wararka naga soo gaaraya degaanka Ceel Afweyn ee gobolka Sanaag ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo uu hoggaaminaayo Kornel Caare oo dhawaan sheegay in uu ka baxay Somaliland ay xalay weerar ku qaadeen degaankaasi.
Degaanka Ceel Afweyn ayaa waxaa fariisin Ciidan ku leh maamulka Somaliland, waxaana la sheegay in uu halkaasi soo weeraray Kornel Caare oo horay uga tirsanaan jiray Ciidanka Somaliland.
Dagaal socday Muddo dhowr Saacaddood ah ayaa dhexmaray Ciidanka Somaliland iyo waliba Jabhadda uu hoggaamiyo Caare, waxaana dagaalkaasi ka dhashay Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Goobta lasoo weeraray ayaa waxaa ku sugnaa Wasiiro ka tirsan maamulka Somaliland,oo waday waanwaan ku aadan in la qanciyo Ciidanka Jabhadda ah si ay dib ugu soo laabtaan Somaliland.
Caare ayaa hoggaamiya Koox hubeysan oo Jabhad ah oo kala soo goostay Somaliland ka dib markii ay isku dhaceen Taliyaha Ciidanka Somaliland.
Previous articleBarakac ka bilaawday Deegaano hoostaga Gobolka Shabeelada Hoose
Next articleDowladda Mareykanka oo ka hadashay duqeyn markale ka dhacday Gobolka Mudug
Side Loga Bixi Kara Abaaraha So Noq noqday Ee Soomaaliya